ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > က Man [လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်]
Gott schuf den Menschen, Mann und Frau, nach dem Bilde Gottes. Gott segnete den Menschen und gebot ihm, sich zu vermehren und die Erde zu füllen. In Liebe schenkte der Herr dem Menschen Macht, sich als Haushalter die Erde zu unterwerfen und ihre Geschöpfe zu regieren. In der Schöpfungsgeschichte ist der Mensch die Krone der Schöpfung; der erste Mensch ist Adam. Symbolisiert durch Adam, der sündigte, lebt die Menschheit in Auflehnung gegen ihren Schöpfer und hat dadurch Sünde und Tod in die Welt gebracht. Ungeachtet seiner Sündhaftigkeit bleibt der Mensch jedoch in der Gottebenbildlichkeit und wird durch sie definiert. Daher verdienen alle Menschen kollektiv und individuell Liebe, Ehrerbietung und Respekt. Das ewig vollkommene Gottesbild ist die Person des Herrn Jesus Christus, des «letzten Adam». Durch Jesus Christus erschafft Gott die neue Menschheit, über die Sünde und Tod keine Gewalt mehr haben. In Christus wird die Gottebenbildlichkeit des Menschen vollendet werden. (1. ကြွက် 1,26စာ-၁၁; ဆာလံ 8,4စာ-၉; ရောမ 5,12စာ-၂၀; ကောလောသဲမြို့ 1,15; 2. ကောရိန္သု 5,17; 3,18; 1. ကောရိန္သု ၁5,21စာ-၉; ရောမ 8,29; 1. ကောရိန္သု ၁5,47နှစ်ဆယ် 1. ဂျိုဟန် 3,2)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်သောအခါ၊ လနှင့်ကြယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ကြစဉ်၊ စကြဝvastာ၏ကြီးမားကျယ်ပြန့်မှုနှင့်ကြယ်တစ်လုံးစီတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကြီးမားလှသောတန်ခိုးတော်ကိုတွေ့မြင်သောအခါဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ဂရုစိုက်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်အကန့်အသတ်ရှိ - အမှိုက်ပုံထဲတွင်ပုရွက်ဆိတ်များခုန်ပေါက်ထွက်နေသောပုရွက်ဆိတ်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူသည်ဤတောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးကမ္ဘာဟုခေါ်သည်ကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်သင့်သနည်း။ သူသည်ပုရွက်ဆိတ်တစ်ခုစီအတွက်လည်းအဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်သင့်သနည်း။
Die moderne Wissenschaft erweitert unser Bewusstsein darüber, wie gross das Universum und wie gewaltig jeder Stern ist. In astronomischen Begriffen sind Menschen nicht bedeutender als ein paar sich wahllos bewegende Atome – aber es ist der Mensch, der die Frage der Bedeutung stellt. Es sind Menschen, die die Wissenschaft der Astronomie entwickeln, die das Universum erforschen, ohne je das Heim zu verlassen. Es sind Menschen, die das Universum in ein Sprungbrett für geistliche Fragen verwandeln. Es geht zurück auf Psalm 8,4-၂၂:
သင်ပြင်ဆင်သောကောင်းကင်နှင့်သင်၏လက်ချောင်း၊ လနှင့်ကြယ်များကိုငါမြင်သောအခါ၊ ထိုသူကိုသင်တို့မြင်သောလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်း။ သူ၏ခေါင်းကိုဘုန်းအသရေနှင့်ပတ်ရစ်တော်မူပြီ။ သူ၏ခေါင်းကိုဘုန်းအသရေနှင့်ပတ်ရစ်တော်မူပြီ။
ဒီတော့လူကဘာလဲ။ ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာကြောင့်ဂရုစိုက်တာလဲ။ လူသားများသည်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကဲ့သို့အချို့သောနည်းလမ်းများရှိသော်လည်းနိမ့်ကျသော်လည်းဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်ဂုဏ်ကျက်သရေကိုရရှိသည်။ လူသားများသည်ဝိရောဓိ၊ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မကောင်းမှုနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းတို့သည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အညီပြုမူသင့်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကြောင့်စွမ်းအားဖြင့်ယိုယွင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအခြားသတ္တဝါများအပေါ်အာဏာရှိသည်။ ဤသည်ဝေးသည်ဘုရားသခင်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော်ငြားလည်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဂုဏ်တင်သည်ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
လူသားကဘာလဲ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကို Homo sapiens လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့ကို nephhesh ဟုခေါ်ပြီးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်သူတို့၌ဝိညာဉ်ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဝိညာဉ်၌ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေမှုန့် ဖြစ်၍ တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့သေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်မြေမှုန့်သို့ပြန်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒသည်တိရစ္ဆာန်တစ်ခုနှင့်တူသည်။
ဒါပေမယ့်ကျမ်းစာကပြောတာကကျွန်တော်တို့ဟာတိရစ္ဆာန်တွေထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ လူသားများသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာရှုထောင့်ရှိသည် - ထိုသိပ္ပံပညာသည်ဘဝ၏ဤ ၀ ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပြောပြနိုင်ပါ။ အတွေးအခေါ်ပင်မဟုတ်၊ သူတို့ကိုစဉ်းစားလို့သာယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖြေများမရနိုင်ပါ။ မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှု၏ဤအပိုင်းကိုဖွင့်ဟချက်ဖြင့်ရှင်းပြရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာလုပ်ရမည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ဂရုစိုက်ကြောင်းပြောပြရမည်။ အဖြေများကိုကျမ်းစာ၌တွေ့ရှိရသည်။
Aber die Erschaffung von Menschen wird nicht in derselben Weise wie alles andere beschrieben. Es gibt kein «Und Gott sprach… und es geschah so.» Stattdessen lesen wir: «Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen…» (1. ကြွက် 1,26). Wer ist dieses «uns»? Der Text erklärt das nicht, aber es ist klar, dass Menschen eine besondere Schöpfung, nach dem Bilde Gottes gemacht, sind. Was ist dieses «Bild»? Wiederum, der Text erklärt das nicht, aber es ist klar, dass Menschen speziell sind.
ဤ "ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်" သည်အဘယ်သို့သောသီအိုရီများစွာကိုအဆိုပြုထားသည်။ အချို့က၎င်းသည်ဉာဏ်ရည်၊ ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအတွေး၏စွမ်းအားသို့မဟုတ်ဘာသာစကားဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အချို့က၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးသဘောသဘာဝ၊ ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခြင်း၊ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်နတ်ဘုရားများအတွင်းရှိဆက်ဆံရေးကိုထင်ဟပ်စေသည်ဟုဆိုကြသည်။ အခြားသူများကမူ၎င်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်သည်၊ ရွေးချယ်ရန်ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်ဟုဆိုကြသည်။ တချို့ကဤရုပ်ပုံသည်ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့်၎င်း၏သတ္တဝါများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်သည်၊ သူတို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင့်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများကိုကျင့်သုံးသောအခါ၌အုပ်ချုပ်မှုသည်ဘုရားသခင့်အပေါ်၌သာမူတည်သည်။
Was die Leser unter dieser Formulierung verstanden, ist offen, aber es scheint auszudrücken, dass Menschen auf eine bestimmte Weise wie Gott selbst sind. Es liegt eine übernatürliche Bedeutung darin, wer wir sind, und unsere Bedeutung liegt nicht darin, dass wir wie Tiere, sondern wie Gott sind. 1. Mose sagt uns nicht viel mehr. Wir erfahren in 1. ကြွက် 9,6, dass jeder Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist, sogar nachdem die Menschheit gesündigt hatte, und daher darf Mord nicht toleriert werden.
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည်“ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်” ကိုမဖော်ပြတော့ဘဲဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ဤဝေါဟာရကိုထပ်မံအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ဘုရားသခင်၌ပြည့်ဝစုံလင်သောပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်သည်ကိုယ်ကျိုးစွန့်မေတ္တာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ဖော်ပြသည်ကိုထိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီပုံသွင်းခံရရမည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အပြည့်အဝစွမ်းရည်ကိုရရှိစေသည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှင်သန်ခွင့်ရလေကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်လေဖြစ်သည်။
ပြန်သွားကြရအောင် 1. Mose, denn dieses Buch sagt uns mehr darüber, warum sich Gott so sehr um Menschen kümmert. Nachdem er sagte: «Lasst uns», tat er es: «Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau» (1. ကြွက် 1,27).
ဤနေရာတွင်သတိပြုပါ - အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသည်။ သူတို့အတူတူပင်ဝိညာဏအလားအလာရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာလူမှုရေးအခန်းကဏ္ roles သည်လူတစ် ဦး ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာတန်ဖိုးကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ မြင့်မားသောအသိဉာဏ်ရှိသူသည်နိမ့်ကျသောဉာဏ်ရည်ထက် ပို၍ တန်ဖိုးမကြီးပါ၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရပြီးလူသားအားလုံးသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ဂုဏ်အသရေ၊
ခေတ်သစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများကခရစ်ယာန်ဘာသာသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သည်ဟုစွပ်စွဲကြသည်။ ဤအခွင့်အာဏာသည်ကမ္ဘာမြေကို“ နှိမ့်ချ” ရန်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များကို“ အုပ်စိုးရန်” လူတို့အားဂေဟစနစ်အားဖျက်ဆီးရန်ခွင့်ပြုပါသလား။ လူတွေဟာဘုရားသခင်ပေးတဲ့စွမ်းအားကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ဘဲအစေခံရန်အသုံးပြုသင့်သည်။ သင်သည်ဘုရားသခင်အုပ်ချုပ်သည့်နည်းအတိုင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုပြုရမည်။
လူအချို့ကဤအာဏာနှင့်ကျမ်းချက်ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းခြင်းကိုကောင်းစွာအသုံးပြုစေလိုသည်ဟူသောအချက်ကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ ဒီမှတ်တမ်းထဲမှာတစ်ခုခုကိုကျော်သွားရင်ဘုရားသခင်ကအာဒံကိုဥယျာဉ်စောင့်ခိုင်းတယ်။ သူသည်အပင်များကိုစားနိုင်သည်။ သို့သော်ဥယျာဉ်ကိုမဖျက်ဆီးဘဲမနေသင့်။
1. Mose sagt uns, dass die ersten Menschen Adam genannt wurden (1. ကြွက် 5,2), das gebräuchliche hebräische Wort für «Mensch». Der Name Eva ähnelt dem hebräischen Wort für «Leben/lebend»: «Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da leben.» In moderner Sprache bedeuten die Namen Adam und Eva «Mensch» und «Jedermanns Mutter». Was sie in 1. Mose3taten – sündigen – ist das, was die gesamte Menschheit getan hat. Die Geschichte zeigt, warum die Menschheit in einer Situation ist, die alles andere als perfekt ist. Die Menschheit wird durch Adam und Eva verkörpert – die Menschheit lebt in Rebellion gegen ihren Schöpfer, und das ist der Grund, warum Sünde und Tod alle menschlichen Gesellschaften kennzeichnen.
Aber nun betritt die Schlange die Bühne. Eva wurde versucht, etwas zu tun, was Gott verboten hatte. Sie wurde eingeladen, ihren Gefühlen zu folgen, ihr selbst zu gefallen, statt der Anweisung Gottes zu vertrauen. «Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und ass und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er ass» (1. ကြွက် 3,6).
သစ်ပင်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ စာသားက "ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းခြင်း" ထက်မကပြောထားသည်။ အဲဒါဟာအတွေ့အကြုံအတွက်လား။ သူကပညာကိုကိုယ်စားပြုပါသလား မည်သို့ပင်ကိုယ်စားပြုသည်ဖြစ်စေအဓိကအချက်မှာ၎င်းအားတားမြစ်ထားပြီးမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုစားခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ရသည်။ လူများသည်မိမိတို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ကိုပုန်ကန်။ ပုန်ကန်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်ဥယျာဉ်အတွက်အသုံးမပြုတော့ဘဲ“ အသက်ပင်” နှင့်မသင့်တော်တော့ပါ။
Gott erklärte die Konsequenzen: Eva würde Kinder gebären, was Teil des ursprünglichen Plans war, aber nun unter grossen Schmerzen. Adam würde den Acker bebauen, was Teil des ursprünglichen Plans war, aber nun unter grosser Mühsal. Und sie würden sterben. In der Tat, sie waren bereits tot. «Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben» (1. ကြွက် 2,17). Ihr Leben in Einheit mit Gott war vorbei. Alles was übrig blieb, war blosse physische Existenz, weit weniger, als das wahre Leben, das Gott beabsichtigte. Und doch gab es Potenzial für sie, denn Gott hatte immer noch seine Pläne mit ihnen.
Es würde einen Kampf zwischen der Frau und dem Mann geben. «Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein» (1. ကြွက် 3,16). Menschen, die ihre Angelegenheiten in ihre eigenen Hände nehmen (wie Adam und Eva es taten), statt Gottes Anweisungen zu folgen, haben sehr wahrscheinlich Konflikte miteinander, und rohe Gewalt herrscht gewöhnlich vor. Das ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft ist, nachdem die Sünde einmal eingedrungen ist.
ဒီတော့စင်မြင့်ကအဆင်သင့်ပဲ။ လူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြproblemနာကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘဲသူတို့အမှားပဲ။ ကိုယ်တော်သည်သူတို့ကိုအပြည့်အဝအစပြုခဲ့သည်၊ သို့သော်သူတို့သည်ယင်းကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီးထို အချိန်မှစ၍ လူသားအားလုံးသည်အပြစ်ကူးစက်ခံနေရသည်။ သို့သော်လူ့အပြစ်များရှိသော်လည်းလူသားများသည်ဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီနေဆဲဖြစ်သည်။
Jesus Christus, Gott im Fleisch, ist das vollkommene Bild Gottes (Kolosser 1,15). Er war voll Mensch, und zeigt uns genau, was ein Mensch sein sollte: Vollkommen gehorsam, vollkommen vertrauend. Adam war ein Typ für Jesus Christus (Römer 5,14), und Jesus wird «der letzte Adam» genannt (1. ကောရိန္သု ၁5,45).
Was Adam für die physische Menschheit tat, dass tut Jesus Christus für die geistliche Überarbeitung. Er ist der Anfangspunkt der neuen Menschheit, der neuen Schöpfung (2. ကောရိန္သု 5,17). In ihm werden alle wieder lebendig gemacht werden (1. ကောရိန္သု ၁5,22). Wir werden von neuem geboren. Wir beginnen neu, diesmal auf dem rechten Fuss. Durch Jesus Christus schafft Gott die neue Menschheit. Sünde und Tod haben keine Macht über diese Neuschöpfung (Römer 8,2; 1. ကောရိန္သု ၁5,24-26). Der Sieg wurde errungen; die Versuchung wurde zurückgewiesen.
Jesus ist der Eine, dem wir vertrauen und das Modell, dem wir folgen sollen (Römer 8,29-35); wir werden in sein Bild verwandelt (2. ကောရိန္သု 3,18), das Bild Gottes. Durch Glaube an Christus, durch sein Wirken in unserem Leben, werden unsere Unvollkommenheiten beseitigt, und wir werden näher zu dem gebracht, was wir nach Gottes Willen sein sollten (Epheser 4,13. 24). Wir schreiten von einer Herrlichkeit zur anderen – zu einer viel grösseren Herrlichkeit!
Natürlich sehen wir das Bild noch nicht in all seiner Herrlichkeit, aber uns wird versichert, dass wir es sehen werden. «Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen [Adam], so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen» [Christus] (1. ကောရိန္သု ၁5,49). Unsere auferstandenen Leiber werden wie der Leib Jesu Christi sein: herrlich, kraftvoll, geistlich, himmlisch, unvergänglich, unsterblich (V. 42-44).
Johannes hat es so ausgedrückt: «Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist» (1. ဂျိုဟန် 3,2-3). Wir sehen es noch nicht, aber wir wissen, dass es geschehen wird, denn wir sind Gottes Kinder, und er wird es verwirklichen. Wir werden Christus in seiner Herrlichkeit sehen, und das bedeutet, dass wir auch eine ähnliche Herrlichkeit haben, dass wir in der Lage sind, geistliche Herrlichkeit zu sehen.
ထို့နောက်ယောဟန်ကဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်ချက်ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည် -“ ထိုသို့မြော်လင့်သောသူမည်သည်ကား၊ ကိုယ်တော်သန့်ရှင်းတော်မူသည်နည်းတူ၊ ငါတို့ကဲ့သို့သူနှင့်တူသောကြောင့်ယခုသူနှင့်တူကြကုန်အံ့။
ဒါကြောင့်လူသားဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအဆင့်ဆင့်မှာရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝလူကိုပင်ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းထားသည်။ လူတစ်ယောက်ဘယ်လောက်ပဲအပြစ်ကျူးလွန်ပါစေပုံဟာအဲဒီမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသူဟာကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်၌အပြစ်သားတိုင်းပါ ၀ င်သောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အစီအစဉ်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်ကိုအပြည့်အဝခံယူကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များသည်၎င်းသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုအပြည့်အဝနားမလည်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဏကိုယ်ခန္ဓာမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုအတိအကျမသိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သနားကြင်နာတတ်သော၊ ချစ်မြတ်နိုးသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်သမျှများများကိုကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မည်။ ထာဝရကိုလည်းချီးမွမ်းပါမည်။
အခြားလူများကိုကြည့်သောအခါသင်ဘာမြင်သနည်း။ ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်၊ ကြီးမြတ်မှုအလားအလာနှင့်ခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသလော။ အပြစ်သားများအားကျေးဇူးပြုခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏လှပမှုကိုသင်မြင်သလား။ သူသည်လမ်းမှန်မှလမ်းလွဲသွားသောလူသားများကိုရွေးနုတ်သောကြောင့်သင်ဝမ်းမြောက်ပါသလား။ ဘုရားသခင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကြံအစည်တော်၏ဘုန်းတော်ကိုသင်နှစ်သက်ပါသလော။ မင်းမှာမျက်စိရှိလား ၎င်းသည်ကြယ်များထက် ပို၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းသည်ဘုန်းကျက်သရေရှိသောဖန်ဆင်းခြင်းထက် သာ၍ ဘုန်းကျက်သရေရှိသည်။ အမိန့်တော် ရှိ၍၊